ဂျပန်လူမျိုးတို့၏ဘဝတွင် " မည်သို့သေဆုံးပုံ" သည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ - JAPO Japanese News
ဂါ 23 Mar 2021, 10:29 မနက်
死生観（しせいかん）လို့ခေါ်တဲ့ စကားလုံးကို စာဖတ်ပရိသတ်တို့သိကြလား?
ဒါဟာ ဂျပန်လူမျိုးရဲ့ အပြုအမှုဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ အမေရိကန်စစ်တပ်အလွန်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ရတာကတော့ Kamikaze အထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်မကြီး ပဲဖြစ်ပါတယ်။
KAMIKAZE ၊ အထူးတပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်ကြတဲ့ ဒီအဖွဲ့ဟာ၊ တစ်ကြောင်းစာလောင်စာနဲ့ ဗုံးကိုသာတင်ဆောင်လာသော လေယာဥ်ပျံနဲ့ သင်္ဘော၊ ရေငုတ်သင်္ဘောကိုစီးပြီး ပြိုင်ဘက်ရဲ့စစ်သင်္ဘောကိုထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
Crazy ပဲ !!
တကယ်ပဲ သူတို့တွေဟာ Crazy ဖြစ်နေခဲ့ပါသလား?
ဒါဟာ သူတို့တွေရဲ့နှလုံးသားအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ ဂျပန်တို့ရဲ့ “ ဘဝနှင့်သေခြင်းရှုမြင်ပုံ” ကခိုင်းစေခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ လုံးဝ ဆေးသုံးပြီးရူးမိုက်သွားခြင်း မဟုတ်ခဲ့ပါ။
ကိုယ်သာမလုပ်ရင် အမိမြေနဲ့တန်ဖိုးထားရတဲ့မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအဖော်တွေကို မစောင့်ရှောက်နိုင်တော့ဘူး။
သေရမှာ မလိုလားသလိုကြောက်တယ်။ သို့သော် ဒါကိုကျော်လွှားရမယ့် mission သူတို့မှာရှိခဲ့တယ်။
ဒီလိုခံစားချက်ကိုဖော်ပြဖို့ အတော်လေးခက်ခဲမယ်လို့ ထင်တယ်ဗျ…
ခေတ်တွေပြောင်းလဲလာခြင်းကြောင့် ဒီခံစားမှုကလည်းလွှင့်ပျယ်လာပေမဲ့၊ လက်ရှိတိုင် ဟိုး.. နှလုံးသားအနက်ရှိုင်းဆုံးထဲမှာကျန်ရစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ဂျပန်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ လေ့ကျင့်ရေးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ ဂျပန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတွင် ဒီလိုဖော်ပြချက်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်များသည် နည်းပညာမြင့်မားပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ထို့အပြင် သတ္တိရှိသည်။
သို့သော် မောင်းနှင်သည့်အချိန်တွင် မိမိကိုယ်ကိုစွန့်လွတ်အနစ်နာခံရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်းက ကြီးမားသောပြဿနာပင်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ဟာ ရှည်လျားတဲ့စစ်ပွဲအတွင်း ဂျပန်ရဲ့ဘဝနဲ့သေခြင်းအပေါ်ရှုမြင်ပုံကို သိလိုက်ရပြီး၊ ဒါကိုရူးမိုက်တယ်လို့ သူတို့မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ကိုယ်ပိုင်ဘဝထက်၊ အုပ်စုတစ်ခုလုံး (နိုင်ငံ၊ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေများ) ရဲ့ဘဝများကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ အတွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ “ အလဟသသေဆုံးခြင်း” ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိပြန်တယ်။
အဓိပ္ပါယ်မဲ့သေဆုံးခြင်း ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ …။
မိမိသေဆုံးခြင်းက လောကကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကာကွယ်နိုင်မယ်သာဆို ပျော်ပျော်ကြီးသေလိုက်မယ်။
ဒါဟာ Crazy ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့လည်း မတူပါဘူး။
ပျံနေသောငှက်ဟာ ရေမျက်နှာပြင်ကိုမလှုပ်ရှားစေဘဲ၊ လှပတဲ့ရေမျက်နှာပြင်ကိုထိုအတိုင်းသာထားပြီး ပျံသန်းတယ်။
မိမိသေဆုံးချိန်လည်းထိုနည်းတူပဲ နောက်ကျောရွံ့မကျန်စေဘဲ ပျံ့သန်းတတ်ကြတယ်။
တစ်ချိန်ချိန်မှာသေရမှာပဲဖြစ်လို့ သေခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီး၊ မသေခင်ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတာ အမြဲတစေစဥ်းစားကြပါတယ်။
နောက်ပြီး ထိုသေခြင်းရောက်မလာခင် အများအတွက် လောကကြီးနဲ့မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုအတွက် ဘာကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ?
ဒါကိုစဥ်းစားပြီး အသက်ရှင်သင့်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ စွမ်းအားရှိသမျှအသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ဂျပန်တို့ရှေးကတည်းကလက်ကိုင်ထားကြတဲ့ ဘဝနှင့်သေခြင်းရှုမြင်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာဟာခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေမှာရှိနေတယ်။
ထိုအထဲမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်သွားမလဲ။ ဘာကိုလုပ်ရင် ဒီတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိမလဲ…
ဒီအပြင် မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေများကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်၊ သူတို့ကိုဝမ်းမနည်းစေဖို့အတွက် ..
ဒီအတွက်တတ်နိုင်သလောက်သတင်းတွေဖြန့်ဝေပေးပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံကို attention ရအောင်လုပ်ပေးရုံကလွဲရင် ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။
အားလုံးအတွက် အန္တရာယ်နည်းအောင်ပြောပေးရုံကလွဲပြီး ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
သို့သော် အမှန်တရားအတွက်တော့ အားလုံးအတူတူတိုက်ခိုက်သွားနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်…
အမေရိကန်တွေကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ တစ္ဆေ White Zero Fighter !!!
Niigata စီရင်စုတွင် နှင်းများပြင်းထန်စွာကျဆင်းမှုကြောင့် မြေပြင်ကာကွယ်ရေးတပ်သို့စေလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆို
၁ယောက်တည်းနဲ့ လူ ၁၀၀၀၀ ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်စစ်သား !!!
ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းမှ မတူညီတဲ့သမိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အိုကီနာဝါ
ဆာမူရိုင်း၏လက်နက်သည် ဓားမဟုတ်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ ??
နှစ် ၁၀၀ မတိုင်ခင်ကနေ့ရက်တွေဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နဲ့ထပ်တူကျနေ
ဂျပန် Toshiba က “ Quantum cryptography” ကိုပြည်တွင်း စီးပွားဖြစ်စတင်ရောင်းချမည်ဟုကြေညာ
သေသွားရင်ဘယ်ကိုသွားကြမလဲ ? အလောင်းဟိုတယ်ဆိုတဲ့ စီးပွားရေးအသစ်
ကလေးရောလူကြီးပါ ပျော်ရွှင်စေမည့် ခဲဖျက်တံဆိပ်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုက အလွန်အံ့အားသင့်စရာပါပဲ !
ယန်း ၁၀ ဘီလီယံအမွေရထားသောမိသားစုမှ မွေးဖွားလာတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး
ဂျပန်ဓားတွေ ဘာလို့ထက် ?!!!
My Neighbor Totoro ဇာတ်ကားထဲက လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအချက်များ…
မိန်းမချောလေးတွေဘာကြောင့် AV အလုပ်ကိုလုပ်ကြလဲ ?
Iwate စီရင်စုရဲ့ မြင်းလှည့်လည်ပွဲ Chagu Chagu Umakko Festival
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်အကောင်းဆုံးမှော်ဆရာ လက်ရှိချိန်ထိ ထိုစွမ်းအားတွေရှင်သန်နေဆဲ ?
ယောက်ျားဆန်လွန်းသော အခမဲ့ထုတ်ကုန် !!!